Samsung Galaxy Tab S7 Review : Android Tablet တွေထဲမှာ ရွေးချယ်သင့်ဆုံး Tablet?? — Anycall Mobile
Samsung Galaxy Tab S7 Review : Android Tablet တွေထဲမှာ ရွေးချယ်သင့်ဆုံး Tablet??
By liam October 25, 20204Mins Read
အခုလက်ရှိမှာ Samsung ဟာ Android Tablets တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Tablet တွေကိုထုတ်နေတာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဉပမာအနေနဲ့‌ေပြာရရင် လည်း Android Tablet တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး Experience ပေးနိုင်တဲ့ မနှစ်က Tab S6 လိုမျိုးပေါ့ …ဒီနှစ်မှာတော့ Samsung ဟာ Note 20 Series နဲ့အတူ Tab S7 နဲ့7Plus ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အခု Review လုပ်သွားမယ့် Tab S7 ကကော Tab S6 လိုမျိုး Experience ပေးနိုင်ပါ့မလား ???
ကဲ Review မှာဆက်ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့…
Samsung Galaxy Tab S7 ရဲ့ Design ဟာ အခု လက်ရှိမှာတွေ့နေရတဲ့ iPad Pro လိုပံုစံပါပဲ။ iPad Pro ပုံစံဆိုပေမယ့် လုံး၀ဆင်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ဘေးဘောင်တွေက Flat Edge Design မျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက် လက်ထဲမှာကိုင်ရတာ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ရှိပါတယ်။ ဒီဘေးဘောင်တွေကို Metal နဲ့ကွပ်ပေးထားတော့ Tablet ကို ကြည့်ရတာပိုပြီး Premium ဆန်စေပါတယ်။ကျောဘက် Desing မှာတော့ Camera နှစ်လုံး နဲ့ LED Flash ပါတဲ့ Camera Setup အောက်မှာ S-Pen အတွက် Magnetic Strip ကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီ Magnetic Strip နေရာမှာတော့ Glass ကိုသုံပေးထားပြီး ကျန်တဲ့ Back Design ကိုတော့ Matte Coating ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Matte Coating ဆိုပေမယ့်လည်း ကျောဘက်မှာ လက်ဗွေရာ အနည်းငယ်ထင်နေတာကို သိပ်တော့အားမရပါဘူး။
ဖုန်းရဲ့ရှေ့ဘက်မှာတော့ Samsung ကနေ Landscape သုံးရာမှာ ပိုအဆင်ပြေစေဖို့Front Facing Camera ကို Tablet ရဲ့ ဘေးဘက်ထိပ်မှာထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Video Call ခေါ်တဲ့အခါတွေမှာ တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။Tablet ရဲ့ ထိပ်မှာ Side-Mounted Fingerprint Scanner ပါတဲ့ Power ခလုတ် ၊ Volume ခလုတ် နဲ့ Sim Tray တို့ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး အောက်ခြေမှာတော့ Samsung Keyboard Cover နဲ့ချိတ်နိုင်ဖို့ Keyboard Connectors တပ်ဆင်ပေးထားတာကိုတွေရမှာပါ။ Tablet ရဲ့‌ ဘေးဘက်တွေမှာတော့ Dual AKG-tuned speakers ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ စုစုပေါင်း Speakers လေးခုပေါ့။
Galaxy Tab S7 ရဲ့ အကိုလို့ပြောရမယ့် Tab S7 Plus မှာ AMOLED display ကိုသုံးပေးထားပေမယ့်လည်း Tab S7 မှာတော့ 2,560 x 1,600 resolution ရှိတဲ့ 11-inch LCD Display ကိုပဲသုံးပေးထားပါတယ်။ ဒီ Display ဟာဆိုရင်ရင် 120Hz Refresh Rate ကိုလည်းထောက်ပံ‌့ပေးထားပါတယ်။ LCD Display ဆိုပေမယ့်လည်း Display ဟာ အရောင်‌ေတာ်‌ေတာ်‌ေလးစိုပြီး တောက်ပါတယ်။ 16:10 Screen To Body Ratio ကြောင့်လည်း Video ‌ေတွကြည့်တဲ့အခါမှာ တော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းပါတယ်။ Netflix မှာ Series ကောင်းကောင်းနဲ့နှပ်လိုက်လို့ကတော့ လုံး၀ရှယ်ပါပဲ။
ဒီလို Display ကိုမှ 120Hz Refresh Rate နဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ Touch တစ်ခါထိလိုက်တိုင်းမှာ Animations တွေကလုံး၀ Smooth ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီ 120Hz Refresh Rate ဟာ Overall User Experience ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်သလိုပါပဲ။ဒါပေမယ့်လည်း Display ရဲ့ Brightness ဟာ အိမ်ထဲမှာပ‌‌ဲထိုင်သုံးရင်အဆင်ပြေပေမယ့် အပြင်‌ေန‌ေရာင်‌နဲ့ တိုက်ရိုက်ကျတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ သိပ်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ နေရောင်အောက်မှာ လုံး၀ကြည့်လို့မရတဲ့အထိတော့ မဖြစ်သွားပေမယ့်သေချာတော့ကြည့်ယူရမှာပါ။ ဒါကတော့ Display ရဲ့ အားနည်းချက်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့…
Camera အတွက် Tab S7 ရဲ့ကျောဘက် မှာ 13MP primary lens ကို 5MP ultra-wide sensor နဲ့တွဲပေးထားပါတယ်။ ‌ရှေ့ဘက်မှာတော့ 8MP Front Facing Camera ကိုသုံးပေးထားပါတယ်Camera Performance ကတော့ Tablet တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အလင်း‌ေရောင်ကောင်းကောင်းရရင် ပုံကောင်းတွေကိုရိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ front-facing camera ကလည်း Selfie ကတော့ Video Calls တွေခေါ်တဲ့အခါတွေမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။
Low Light မှာရိုက်ရင်တော့ ပုံတွေမှာ Noise တွေသိသိသာသာထသွားတဲ့အပြင် ပုံက Detail လည်းမကျတော့ပါဘူး။ selfie cam မှာတော့ အလင်းနည်းနည်းရရုံနဲ့ Video Chat ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ Tablet တွေဟာ Camera အသားပေးထုတ်ထားတာမဟုတ်လို့ Camera ပိုင်းမှာတော့ အပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။
Samsung Galaxy Tab S7 ရဲ့ Performance မှာတော့ Snapdragon 865 Plus SoC ကို 6GB RAM ၊ 128GB Internal Storage နဲ့တွဲပေးထားပါတယ်။ ဆိုတော့ Performance ကဘယ်လိုရှိမလဲ??Snapdragon 865 Plus Chipset နဲ့ဆိုတော့ Performance က ပြောနေစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ Graphic မြင့်တဲ့ Apps တွေ ကိုပဲသံုးမလား? Graphic အမြင့်ဆုံး Games တွေကို‌ေကာဆော့ဦးမလား? Tab S7 အေးအေးဆေးဆေး Handle လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခု Review Unit ဟာ RAM 6GB ဆိုပေမယ့်လည်း Multi Tasking မှာ Lag တာတွေမရှိဘဲ ချောချောမွေ့မွေ့ပါပဲ။
ဒီလို Performance ကိုမှာ 120Hz Refresh Rate နဲ့ ထပ်ပေါင်း‌လိုက်တော့ လက်ရှိ Android Tablet တွေထဲမှာ Performance အကောင်းဆုံး Tablet လို့ပြောလို့ရပါတယ်။Gaming ပိုင်းမှာတော့ PUBG ကို အမြင့်ဆုံး Graphics Ultra HD နဲ့ Frame Rate Ultra အထိထားဆော့လို့ရပါတယ်။ ဒီလို Graphics အမြင့်ဆုံးထားဆော့တဲ့အခါ‌ေတွမှာ Lag တာတွေ ၊ Frame Rate ကျသွားတာတွေမဖြစ်ပါဘူး။ အနည်းငယ်ပူလာရုံလောက်ပဲရှိပါတယ်။
Galaxy Tab S7 မှာ Android 10 အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ OneUI 2.5 နဲ့ Run ပေးထားပါတယ်။ ဒီ OneUI 2.5 မှာ Tab S7 ရဲ့ အသက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဘNotes App ကို Samsung က S-Pen နဲ့ပိုသုံးလွယ်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
S-Pen ဆိုမှ Galaxy Tab S7 ထဲက S-Pen ဟာလည်း သုံးရလွယ်တဲ့ Design မျိုးနဲ့ထွက်လာပါတယ်။ ဒီ S-PEN ရဲ့ Latency ဟာ 9ms ပဲရှိပါတယ်။ ဒါကိုမှ 120Hz refresh rate နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ Notes မှာ Notes တွေရေးတာမျိုး ၊ ပုံ‌ဆွဲတာမျိုး လုပ်တဲ့အခါ လုံး၀ Smooth ဖြစ်တဲ့ Experience ကိုခံစားရမှာပါ။ ပြောရရင် စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးနေရသလိုမျိုး Experience ပေါ့..
ဒါက ကျောင်းသားတွေအပြင် Artists တွေအတွက်ပါ တော်တော်‌လေးအဆင်ပြေစေမှာပါနောက်ထပ် S-PEN ရဲ့ Air Actions Smart select ၊ Screen write ၊ ဆိုတဲ့ Features တေ‌ွကြောင့် ဘယ် Application ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူ Notes တွေမှတ်လို့ရမှာပါ။ ဒီ‌မှာ နောက်ထပ် Hidden Feature တစ်ခုကတော့ S-Pen ပေါ်က ခလုတ်ကိုဖိထားပြီး Note ‌ေတွကို ဖျက်လို့ရတဲ့ Feature ပါပဲ။
ဒီလို S-Pen ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် Samsung ကနေ‌ Free ပေးထားတဲ့ Clip Studio Paint, Canva , Noteshelf စတဲ့ App တွေမှာလည်းCreative ဖြစ်တဲ့ Design ကို အလွယ်တကူဆွဲလို့ရဦးမှာပါ
Samsung DeX Mode Support
Samsung DeX Mode ဆိုတာကတော့ Tab S7 ကို PC Experience ရအောင်လုပ်ပေးမယ့် Mode တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် Desktop Mode ပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောပေါ့။ Desktop Mode ဆဆိုပေမယ့်လည်း Chrome ထဲ၀င်တဲ့အခါမှာDesktop version မရဘဲ Mobile Version လိုသုံး‌ေနရဦးမှာပါ။ ဉပမာအနေနဲ့ Chrome က‌နေ Drive ‌ဒါမှမဟုတ် DOCS သုံးချင်တဲ့အခါ Chrome ကနေ တိုက်ရိုက်သုံးလို့မရဘ‌ဲ Drive ၊ DOCS App ထဲကိုသာတန်းရောက်သွားပါတယ်။ ဒါကို Samsung ကနောက် Update မှာပြင်ပေးရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာမှာပါ။ နောက်ပြီး ဒီ DeX Mode ကို Samsung Keyboard Cover နဲ့တွဲသုံးမှသာအဆင်ပြေမှာပါ။ အကြောင်းကတော့ Keyboard မပါဘဲသုံးရင် စာရိုက်ရတာလုံး၀အဆင်မပြေလို့ပါပဲ။
Samsung Galaxy Tab S7 ရဲ့ Battery မှာ 45W Fast Charging ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ 8,000mAh battery ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ 45Wfast charging ထောက်ပံ့‌ေပးထား‌ေပမယ့်လည်း ဘူးထဲမှာတော့ 15W charger ပဲပါပါတယ်။ ဒီ 15W Charging နဲ့ အားသွင်းတဲ့အခါ 0% to 100% ကို ၂ နာရီခွဲလောက်ကြာအောင်သွင်းရပါတယ်။ 45W Fast Charging နဲ့ဆိုရင်တော့ ပိုမြန်မှာပေါ့လေ ..
Battery Experience ကိုပြောရရင် ကျွန်တော်အနေနဲ့ Brightness ကို Medium ထားပြီး YouTube က Videos တွေကြည့်တယ်။ ပြီးရင် Facebook သုံးတယ်။ Game ဆိုလည်း ၂ နာရီလောက်ဆော့လိုက်တယ်။ ညပိုင်းရောက်တော့ Netflix က Series တစ်ခုအပြီးဖြတ်လိုက်တာတောင် အားက 20% လောက်ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေကုန်ကို အေးဆေးသုံးလို့ရပါတယ်။
Tab S7 မှာပါတဲ့ Quad Speakers ဟာ Surrounding Sound ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်။ ဒါကိုမှ Dolby Atmos နဲ့ AKG tuning Features တွေပါတော့ အသံကတော်တော‌်လေးကောင်းသွားပါတယ်။ YouTube မှာ Streaming လုပ်တာမျိုး ဒါမှမဟုတ် Netflix မှာ Movie ၊ Series ‌ေတွထိုင်ကြည့်ရင် လုံး၀အနစ်ကျတဲ့ Media Streaming Experience ကိုရစေမှာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း 3.5mm Headphone Jack တော့မပါလာတော့ပါဘူး။
Galaxy Tab S7 : Conclusion at
အချုပ်အနေနဲ့ Samsung Galaxy Tab S7 ရဲ့ဈေးဟာ 13 သိန်း၀န်းကျင်ရှိပေမယ့်လည်းလက်ရှိ Android Tablet တွေထဲမှာ ‌ရွေးချယ်ဖို့ အကောင်းဆုံး Tablet လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ သူရဲ့ Display ၊ Speakers ၊ Snapdragon 865 Plus Chipset နဲ့ Battery ကြောင့် စာဖတ်တာတွေ ၊ Browsing လုပ်တာ‌ေတွ ၊ Video တွေကြည့်တာတွေ နဲ့ အလုပ်အတွက် Notes Apps တွေသုံးတဲ့အခါတွေမှာ ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေမှာပါ။ အထူးသဖြင့် University ကျောင်းသားတွေ ၊ Artists တွေန‌ဲ့ Business Users တွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး Tablet တစ်လုံးလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးလို့ပြောရင်း Tab S7 ရဲ့ Review လေးကိုဒီမှာပ‌ဲ အဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်…
ကဲ Tab S7 အပေါ်အမြင်လေးတွေကို Comments မှာ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ S21 Series 5G မှာ ဘာ‌ေတွထူးခြားသွားလဲ???